Global Voices teny Malagasy » ‘Tohano ny mpiompy tantely any aminareo’: ireo olana ao Karaiba, Andro Erantany ho an’ny Tantely · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 22 Mey 2021 14:06 GMT 1	 · Mpanoratra Janine Mendes-Franco Nandika Sylvia Aimée
Sokajy: Karaiba, Jamaika, Trinite sy Tobago, Mediam-bahoaka, Tontolo_iainana
Ny 20 May, nomarihan'izao tontolo izao ny faninefany tamin'ny fankalazana isantaona ny Andro Erantany ho an'ny Tantely,  tamin'ny alalan'ny hetsika virtoaly iray  nampiantranoin'ny Food and Agriculture Organization  (FAO), rantsan'ny Firenena Mikambana, ary nifanaraka tamin'ilay lohahevitra “Bee Engaged – Tantely mirotsaka an-tsehatra (Fanamarihana avy amin'ny mpandika: kilalaonteny avy amin'ny hoe Be engaged midika hoe Raiso ny andraikitra) —Miverena Manorina Tsaratsara Kokoa ho an'ny Tantely.”
Tanjon'ny hetsika amin'ity taona ity ny hanairana ny sain'ny olona erantany hoe ny COVID-19  dia vao mainka nampitombo ny tsy fanjariana / tsy fahampian'ny sakafo, no sady mandresy lahatra ihany momba ireo fomba azo hamerenana ny tontolo iainana sy ireo bibikely mpitatitra vovobony izay tena ilaina tokoa.
Manerana an'i Karaiba, nanao ny anjarany ireo mpisera amin'ny media sôsialy, nizara lahatsary momba ilay fotoana, tamin'ny WhatsApp sy ireo fantsona tambajotra hafa. Natao hampianarana ny ankizy ny anjara toerana lehibe tànan'ny tantely ny sasany tamin'ireny . Nikarakara andian-dresaka iray  tamin'ny Andro Erantany ho an'ny Tantely i St. Lucia, izay nanaovana tombana ny dingana vitan'ny indostrian'ny tantely ao amin'ilay nosy.
Tao Jamaika, nifantohan ‘ny Fandaharanasan'ny Firenena Mikambana misahana ny Fampandrosoana ny fahamaroam-piainana sy ny faritra voajanahary saropady ao Cockpit Country , toerana iray vavolombelona fa afaka miara-dàlana tsara ny fampandrosoana sy ny asan'ireo mpiompy tantely- io, rehefa jerena, no hany fomba fanao tokana mitsinjo lavitra (lovainjafy).
Ankoatry ny tontolo iainana manandanja be ananany, tena mifamatotra ara-tantara amin'i Jamaika ihany koa i Cockpit Country. Ny tontolo feno vatosokay ao aminy no toerana niafenan'ireo Maroons  rehefa avy nandositra ny fanandevozana teo ambany fanjanahan'ny Britanika. Na izany aza, mitohy ho loza mitatao hatrany ilay faritra noho ireo fomba fanao tsy mitsinjo lavitra, izay betsaka no vokatry ny ataon'ireo “mpamboly madinika mikapa ny hazo mba hanaovana tsatòka na kitay”, hoy ny UNDP. Notohizan'ny tatitra nataony fa:
Manaiky i Leif Johnson, mpiompy tantely, sy ny anabaviny, Monique, izay mitantana ny toeram-piompian'ny fianakaviana ao Carmel Valley Estate  any avaratra-andrefan'i Trinidad. Mba hitohizan'ny fahaveloman'ny tantely ary hiroboroboany araka ny tokony ho izy, tena ain-dehibe ny fanohanana.
Tamin'ny resaka an-telafaona, nanamarika i Leif fa iray amin'ireo loza mitatao goavana indrindra “ny famotehana ala tsy am-piheverana”, ary na tonga lafatra aza, hoy izy, ny Sampandraharaha misahana ny Ala  ao anatin'ny Ministeran'ny Fambolena, ny Tany ary ny Jono ao amin'ny firenena, dia “tena faran'izay tsy ampy olona.” Noho ny fanaovana tavy mba hovolena na hanorenana trano, miatrika fahaverezan'ny fomba nahazatra azy ny tantely sy ireo bibikely hafa mpamindra vovobony. Ao amin'ilay vondrom-piarahamonina mpamboly an-tampon-kavoana ao Paramin, milaza izy fa amina hektara ny tany no nodiovina, saingy tsy mifanaraka amin'izay fa tsy mba miverina mamboly an'ireo faritra ala ringitra ny tantsaha hanoloana ny teo.
Mandritra izany fotoana izany, any amin'ireo vondrom-piarahamonina tantsaha any amin'ny morony atsinanan'ny firenena, voamarik'i Leif fa fanamby iray goavana ny fahapoizinana avy amin'ny fanafody famonoana bibikely amin'ny voly. Marobe ireo ‘fanafody famonoana bibikely safidin'ireo  ” tantsaha no manimba zavatra betsaka,” isan'izany ireo mpamindra vovobony zanatany. Manana karazany hatramin'ny 50 i Trinidad & Tobago amin'ireo tantely tsy misy fanjaitrany  izay tafiditra anatin'io sokajy io.
Fanamby hafa maro ho an'ireo tantely ao an-toerana ny famafazana tsindraindray an'ireo vondrom-piarahamonina ireo, ataon'ny sampandraharaha avy amin'ny Ministeran'ny Fahasalamana misahana ny Fanarahamaso ny Bibikely Mpamindra aretina,  ao anatin'ny ezaka ho fampihenàna ny fisian'ny moka. Nangatahan'ireo mpiompy tantely manerana ny firenena ry zareo ao amin'ilay sampandraharaha mba hampita mazava tsara sy amin'ny fomba mahomby ny fandaharanasa famafàzana fanafody ataon-dry zareo, ka mba hahafahan'izy ireo mamindra ny tranon-tanteliny ho amin'ny faritra azo antoka. Na dia milaza  aza ny tranonkalan'ny ministera fa tafiditra anatin'ny fomba firosony ny “fampiatiana azo antoka, mahomby ary tsy mamono antoka an'ireo fepetra rehetra fiadiana amin'ny bibikely mpamindra aretina, mifanaraka amin'ny tokony ho izy sy maharitra”, lazain'i Leif fa mamono tantely ireo fanafody simika ampiasain-dry zareo rehefa mahakasika azy.
Ny fahatongavan'ny valanaretina COVID-19 sy ireo fepetra naterany dia vao mainka nahasarotra ny fiarovana ny tantely ho an'ireo andian-tantely maherin'ny 7.000 sy ireo 300 mpiompy tantely voarakitra ao  Trinidad & Tobago. Amin'izao fotoana izao ny firenena dia miaina anaty hamehana , tsy fahafahana mivezivezy eo anelanelan'ny amin'ny 9:00 alina sy 5:00 maraina. Koa satria ny hariva ihany ny tantely vao miverina ao an-tranony, tena olana be ho an'ireo mpiompy tantely ny tsy fahazoan-dry zareo alàlana manokana amin'ilay tsy fahafahana mivezivezy raha vao misy fandaharam-potoana hamendraka fanafody famonoana bibikely. Ankoatra izay, tsy miharihary ny ankamaroan'ny asa fiompiana tantely. Lasa fironana kokoa izao ny miompy tantely any anaty faritra be hazo, izay ny maro aminy dia manakaiky toerana fambolena / fiompiana mampiasa fanafody simika.
Misy anefa ny fanantenana. Clarence Rambharat , minisitry ny fambolena amin'izao fotoana izao, dia nampiseho “fahalinana mavitrika” amin'ny vondrom-piarahamonin'ireo mpiompy tantely ary mahatsapa ny lanjan'ny fiarovana ny tantely ho salama tsara. Manana fikambanana mpiompy tantely  miisa efatra samy hafa i Trinidad & Tobago, miparitaka ara-jeografika, izay nandresy lahatra mba hisian'ny lalàna fandraràna ny fampiasàna fanafody famonoana bibikely. “Maro amin'ireo fanafody simika ampiasaina sy ‘amidy’ eto no “azo antoka”, hoy i Leif, “ny neonicotinoids , izao poizina ho an'ny tantely—ary raràna  any amin'ireo firenena ao anatin'ny Fiombonambe Eorôpeàna.” Rehefa tsy misy ny lalàna tahaka izany, anefa, dia andraikitry ny mpanjifa ny manadihady sy manao safidy mazava.
Ho fandraisany anjara amin'ny fampitomboan-taranaka ny tantely, nanao tolotra ny Tobago Apicultural Society fa hivarotra  mpanjakan-tantely eorôpeàna miisa 150 amin'ny vidiny 100 Dolara Trinidad & Tobago tsirairay (eo amin'ny 15 doalra amerikàna eo) ho an'izay mpiompy tantely liana. Na miasa toy ny fikambanana fototra amin'ny fampifandraisana ireo vondrona mpiompy tantely aza ilay fikambanana ao amin'ilay nosy, misy fandraisana anjara kely ara-bola atao isantaona, dia afaka miditra ho mpikambana daholo izay rehetra liana ny hahafantatra misimisy kokoa momba ny tantely.
Miaza anefa i Leif fa afaka mamboly fahazarana kely sahady ireo mpiompy salantsalany nefa hitondra tombony goavana ho an'ireo tantely. “Jereo izay azo asolo ny fanafody famonoana bibikely,” hoy izy, “na misafidiana iray mba azo ihafiana kokoa, toy ny bioneem .” Ny fomba fanao mampihatra ny Permaculture (fampivadiam-boly)  dia efa teboka iray tsara hanombohana. Mitoloma ho an'ny hamaroam-piainana, amin'ny alàlan'ny fambolena hazo madinika sy karazana zavamaniry maro manome voninkazo, ary hatramin'ny hazo fihinamboa sy anana. “Voasary, manga, zavoka, voanketsihetsy (pasteky), kokombra, voatabia ary voatavo, samy tsara avokoa ho an'ny tantely,” hoy i Leif, “ary hahazo vokatra betsaka tsara lavitra ianao miaraka amin'ny famindràna vony ataon'ny tantely.”
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2021/05/22/152775/
 Andro Erantany ho an'ny Tantely,: https://www.un.org/en/observances/bee-day
 hetsika virtoaly iray: http://www.fao.org/3/cb4515en/cb4515en.pdf
 ny sasany tamin'ireny: https://www.facebook.com/supersimpleofficial/posts/10157754075237064
 andian-dresaka iray: https://www.facebook.com/SaintLuciaGovernment/videos/913512772529576
 Sampandraharaha misahana ny Ala: https://agriculture.gov.tt/divisions-units/divisions/forestry-division/
 fanafody famonoana bibikely safidin'ireo: https://en.wikipedia.org/wiki/Regent_(insecticide)
 tantely tsy misy fanjaitrany: https://tt.loopnews.com/content/watch-matura-beekeeper-reveals-secrets-local-honey#:~:text=Stingless%20bees%20are%20native%20to,to%20continue%20their%20life%20cycles.
 Fanarahamaso ny Bibikely Mpamindra aretina,: https://health.gov.tt/services/insect-vector-control
 300 mpiompy tantely voarakitra ao: https://newsday.co.tt/2021/05/20/on-world-bee-day-tobago-apicultural-society-wants-to-expand-the-industry/?fbclid=IwAR0WXNDJfKgAGp1gy-TztO-EL-rIp0sU2JcpZf7mEsNRe__3PdVf-GMvrHc
 fikambanana mpiompy tantely: https://www.facebook.com/acboonline
 Ny fomba fanao mampihatra ny Permaculture (fampivadiam-boly): https://www.facebook.com/Permaculture-Trinidad-Wa-Samaki-Ecosystems-315981218773/